Slovenia: Iibso hal tigidh gaadiidka ah oo isticmaal dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Slovenia: Iibso hal tigidh gaadiidka ah oo isticmaal dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha
1da Sebtember, Slovenia waxay soo bandhigi doontaa nidaam isku dhafan oo ah gaadiidka rakaabka dadweynaha (IPPT), kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay si aan kala joogsi lahayn u isticmaalaan noocyada kala duwan ee gaadiidka dadweynaha iyadoon loo baahnayn b
1da Sebtembar, Slovenia waxay soo bandhigi doontaa nidaam isku dhafan oo ah gaadiidka rakaabka dadweynaha (IPPT), kaas oo u oggolaan doona dadka isticmaala inay si aan kala go 'lahayn u isticmaalaan noocyada kala duwan ee gaadiidka dadweynaha iyagoon iibsan tikityo gooni ah. Tigidhka tigidhada gaadiidka ee dhinacyo badan leh ayaa markaa bixiya nidaam gaadiid dadweyne oo casri ah, hufan, oo si fudud ugu habboon Slovenia.
Tigidhka tigidhka rakaabka ee dhinacyada badan leh wuxuu mideynayaa adeegsiga habab kala duwan oo gaadiid ah, wuxuuna isku darayaa isticmaalka tareenada joogtada ah iyo isu socodka basaska magaalooyinka Slovenia iyo gaadiidka magaalooyinka ee labada magaalo ee ugu waaweyn Slovenia hal nidaam. Ficil ahaan, tani waxay ka dhigan tahay in Slovenia, rakaabku dooran karo qaabka gaadiidka dadweynaha, kaas oo uu ku isticmaali doono waddo gaar ah hal kaar. "Mashruuca soo bandhigida isku dhafka gaadiidka rakaabka dadweynaha ama tigidhka safarka ee dhinacyada badan waa wajiga ugu dambeeya ee mashruuc adag oo soconaya 15 bilood, kaas oo ay amartay Wasaaradda Kaabayaasha dhaqaalaha kaas oo fududeyn doona isticmaalka gaadiidka rakaabka dadweynaha ee dalka Slovenia," ayuu yiri. MSc. Boštjan Koren, oo ah agaasimaha Tareenka Slovenia - Gaadiidka Rakaabka, lammaanaha ugu horreeya ee mashruuca IPPT, oo muujinaya muhiimadda nidaamka cusub.
Ficil ahaan, tigidh gaadiid rakaab oo dhinacyo badan leh ayaa loo isticmaali doonaa basaska iyo tareenada iskaga kala goosha magaalooyinka iyo magaalooyinka, laga bilaabo 1da Sebtember 2016. Wejiga koowaad wuxuu soo bandhigi doonaa hal tikidh oo lagu kabayo ardayda, ardayda, iyo dadka waaweyn ee waxbarta. “Tani waa kooxda ugu badan ee adeegsadayaasha gaadiidka dadweynaha; Sidaa darteed, waxaan go'aansanay inaan marka hore u fidinno adeegga tikidhka gaadiidka rakaabka ee dhinacyada badan leh. Goor dambe, nidaamka waxaa lagu ballaadhin doonaa wax soo saarka IPPT, oo loogu talagalay qaybaha kale ee rakaabka raaca dadweynaha ee Slovenia, ”ayuu yiri MSc. Suzana Habjanič oo ka socota Adeegga Dhaqdhaqaaqa Joogtada ah iyo Siyaasadda Gaadiidka ee Wasaaradda Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Slovenia.
Mashruucu wuxuu diirada saarey kaliya soo bandhigida farsamada ee tigidhka gaadiidka rakaabka ee dhinacyada badan, laakiin sidoo kale aasaasida abaabulka gaarsiinta iyo maaraynta nidaamka - laga bilaabo qaabeynta fikradaha, horumarinta xalalka nidaamka iyo teknolojiyadda, tijaabinta, iyo hirgelinta kama dambaysta ah. nidaamka ficil ahaan. Nidaamka IPPT wuxuu ku saleysan yahay xal macluumaad ah oo awood u siinaya soo uruurinta qiimaha otomaatiga ah iyo maareynta elektarooniga ah ee xogta ku jirta nidaamka.
Isku-darka gaadiidka rakaabka ee dadweynaha wuxuu siiyaa dadka isticmaala hagaajinta helitaanka iyo waxtarka gaadiidka dadweynaha, iyo adeegyo wanaagsan oo saaxiibtinimo leh. “Muwaadiniinta reer Yurub baahida ay u qabaan dhaqdhaqaaq ayaa ugu horraysa; sidaa darteed waxaa iga go'an inaan daboolo baahida dadku u qabaan dhaqdhaqaaqa. Isla mar ahaantaana, waxaan taageernaa xalalka yareynaya ciriiriga, wasakheynta (oo ay ku jiraan qiiqa gaaska lagu sii daayo), iyo isticmaalka tamarta, oo ay ku jiraan ilaha kale ee tamarta. Dhaqdhaqaaqa waara waa mid deegaan ahaan la aqbali karo, bulsho ahaan waa cadaalad, wuxuuna kobciyaa dhaqaalaha. Waxaan ku faraxsanahay in mashruuca tikidhka gaadiidka rakaabka ee dhinacyada badan ee loogu talagalay gaadiidka rakaabka dadweynaha laga hirgeliyey Slovenia, maadaama ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaadayo dhaqdhaqaaqa waara. Tigidhka tigidhada gaadiidka ee dhinacyada badan leh ee loogu talagalay gaadiidka dadweynaha ayaa awood u siin doonta habab badan oo habab badan u noqda mid fudud oo lagu kalsoonaan karo.
Waxaan jeclaan lahaa in adeegga noocan oo kale ah uu gaaro dhammaan suuqyada Yurub ee keli ah, ”ayay tiri Violeta Bulc, oo ah Wakiilka Yurub ee Dhaqdhaqaaqa iyo Gadiidka hordhaca nidaamka. 85% wadarta qiimaha mashruuca soo bandhigida isku dhafka gaadiidka dadweynaha (IPPT) waxaa lagu maalgeliyaa lacagaha yurubiyanka ah.
Dalxiis Wanaagsan: Meelahii ugu sarreeyay Yurub ee laga furay Amsterdam
Ku cusub hawada Shiinaha: Adeegga Chengdu-Sydney
FDA waxay ogolaatay daawaynta ugu horeysa ee Wilson's ...
Kobaca Suuqa Biyaha Citrus, Tirakoobka, Waxaa qoray...
Fraport: Safarka Easter-ka wuxuu bixiyaa nambarada rakaabka
U safra sida Kun-sano oo kale: Safarro dhaqan iyo bulsho...
Baahida hilib raqiis ah ayaa cirka isku shareeray
Qarax xoogan ayaa ka dhacay Hotelka Saratoga ee...
Fraport waxay dib u eegis ku samaynaysaa Ruushka...
Jamaica waxay amaantay adeeg cusub oo aan joogsi lahayn oo Mareykan ah...
Natiijooyinka ugu sarreeya ee daaweynta calaamadaha menopause
Hal-abuurka Dhaqdhaqaaqa ee Suuqa Diigaaga 2022...
Tallaalka Cusub ee Ka Hortagga ah ee Cudurka Alzheimers...
Tijaabo caafimaad oo ay FDA u ogolaatay maskaxda glioblastoma
Dawooyinka Ka-hortagga Sonkorowga Cusub oo leh Daaweynta Isku-dhafka Saddex-geesoodka ah
Wakhtiga firaaqada iyo soo dhawaynta shaqo la'aanta ugu wayn...
Aeroflot Ruushku waxa uu joojiyay dhammaan duullimaadyadii Maraykanka
Kooxda Barbados waxay ku garaacday Orodka Ground ee WTM LATAM
Diyaaradda cusub ee Caribbean-ka Arajet ayaa dalbatay 20 737 MAX diyaaradood
Dacaayadaha Nazi-ga Ruushka ayaa ku fiday Maraykanka kana yimid Kanada
Daawaynta ugu Horreysa ee La Ansixiyay ee Cytopenic Myelofibrosis
100,000 sababood oo Seychelles ku kalliftay inay dhoola caddeeyaan
Madaxweyne Biden iyo xiriirka cusub ee Aqalka Cad...
Rwanda ayaa lagu wadaa inay soo dhaweyso martida caalamiga ah ee soo socota...
Goobaha Gaarka ah ee Garoonka Olombikada ee Rome waxay u furan yihiin...